Hirgelinta Connections WRT54G Wireless-G Broadband
Bixiyeyaasha ka soo horjeeda sanduuqa khadka calaamaduhu waxay la yimaadaan goobo badan oo khidmad ah oo aan hubaal lahayn. Talaabooyinka qaar ayaa u baahan in la qaado si loo xaqiijiyo shabakadda wireless-kaaga. Sidan ayaan ku sharxi doonaa sida loola shaqeeyo Raadiyaha Linksys WRT54G Wireless-G Broadband. Si aad u hubiso Raadintaada Linksys WRT54G Wireless-G Broadband waxay raacaan tallaabooyinka hoos ku qoran:
FIIRO GAAR AH: Tababarkan wuxuu ku saleysanyahay Raadinta Linksys WRT54G Wireless-G Broadband
Ugu horeyn soo socda qodobbada cinwaankaaga ee shabakadaada: http: // 192.168.1.1
Waxaa laguugu soo diri doonaa magac iyo lambar sir ah, waxaad u baahan doontaa inaad u dhiibto labada maamul waana in laguu diraa bogga qaabeynta.
On screen shaashadda muhiimka ah> Habka Qalabka> Dejinta aasaasiga ah:
Raadi "Magaca Router" oo ka beddel magaca "default WRT54G" oo ah wax aad u ammaan badan.
Qodob kasta oo sir ah ama goobaha nabadgelyada ee xayawaanka waa inaad marwalba isticmaashaa ugu yaraan lix calaamadood iyo isku dhafka koorsooyinka sare iyo kuwa hoose. Waxa kale oo fikrad fiican ah in laysku daro qaar ka mid ah astaamaha lambarka caadiga ah ee leh astaamaha alphanumeric. Waxa kale oo ku dhaqanka wanaagsan ee aan isticmaalin erayada dhabta ah laakiin halkii ay ka tegi lahaayeen xarfaha qaarkood ama ay ku beddelaan xarfaha tirooyinka sida weerarka qaabka loo yaqaan 'dictionary style' la geyn doono oo dhan, laakiin waxtar lahayn.
IE: Cajirtu waxay noqotaa Sp1D3r (Fiiri isku dhafka alpha iyo xarfaha tirooyinka oo ay la socdaan jaangooyooyinka kore iyo hoose)
Ikhtiyaari: Ammaanka dheeraadka ah waxaad sidoo kale joojin kartaa DHCP Maxaa DHCP ah ayaa si toos ah loogu rakibayaa cinwaanka IP-ga, albaabka ugu dambeyn ee furan (gateway of last resort) iyo macluumaadka DNS ee martida kuwaas oo ka dhigaya codsi DHCP ah shabakada deegaanka marka ay ku xiran yihiin. Inkastoo tani ay fududeynayso maaraynta isticmaalaha ugu dambeeya, waxay sidoo kale sii wadi kartaa LAN badan oo halis ah markii la jabiyo maaddaama qofka weerarka ah uu si toos ah u heli doono cinwaanka shabakada internetka ee shabakadda deegaanka. Waxaad joojin kartaa adeega DHCP LAN-ka adigoo gujinaya badhanka "rikoodhka" raadiyaha goobta DHCP. Maskaxda ku hay in haddii aad sidaas samaynayso waa inaad gacanta ku dhigtaa nidaamka TCP / IP adigoo ku xiraya cinwaankaaga wireless adoo isticmaalaya cinwaan sax ah, maaskaro hoose, watta galka iyo macluumaadka DNS. Tani waa in la sameeyaa oo kaliya haddii aad leedahay aqoon sare oo la xidhiidha nidaamka TCP / IP.
Markaad bedesho Magaca Gaariga (iyo ikhtiyaari ahaan naafada ah DHCP) u gudub qaybta hoose ee bogga guji "Save Settings", waa inaad markaas aragto "Settings waa guul". Guji halkaan sii wad.
On screen shaashadda muhiimka ah> Tab tabare:
Soo hel "Wireless Network Name (SSID)" oo bedelaya meesha ugu qiimaha badan si aad wax uga badbaado. Waa inaad codsataa ereyada sirta ah iyo calaamadaha amniga ee laga soo bilaabo talaabada koowaad halkan. Haddii aad rabto waxaad isticmaali kartaa isla goobta aad u isticmaashay Nidaamka Diraha ee talaabada kowaad. Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad joojiso "Soodejinta Wireless Wireless" si markaa router uusan u soo bandhigi karin goobtan muhiimka ah aduunka. Xusuusin: adigoo xakameynaya goobtan waxaad gacanta ku hayn doontaa SSID-da adigoo adeegsanaya cinwaankaaga wireless-kaaga sababtoo ah SSID ee shabakadu ma awoodi doonaan inay go'aamiyaan xulashada shabakadaha raadinta.
Markaad bedesho SSID oo naafo ah xayeysiiska SSID-ka ku sii jeeda dhinaca hoose ee bogga guji "Save Settings", waa inaad markaas aragto "Settings waa guul" wada hadal. Guji halkaan sii wad.
Raadi qaybta Nabadgelyada Wireless ee kor ku xusan ee shaashadda aasaasiga ah waxaadna gujisaa in ay ku qaadato qaybta sugnaanta ammaanka. Raadi sanduuqa "Amniga Amniga" oo aad doorato WEP. Ka dibna raadi "sanduuqa WEP Ammaanka" hoos u dhig sanduuqa oo dooro 128 xabbo 26 hex lambar doorasho muhiim ah. Ku qor xarafka u dhexeeya 6 iyo 8 xarfaha gadaaladda kadibna guji daboolka 128 xabbo 26 hex khadka lambarka ayaa la abuuri doonaa. Hubi oo xusuusnow xarafkan iyo goobahaas gaar ahaaneed sida furayaasha loo baahan yahay in la abuuro si ay ula socdaan adapter-kaaga wireless sidoo kale. Ma awoodi doontid inaad gaadiidka ku dhex wato shabakada WEP awood u yeelashada haddii aaney aheyn goobaha iyo furayaasha isku xirnaanta qalabka oo dhan. Furaha WPA sidoo kale waa ikhtiyaar laakiin had iyo jeer ma taageeraan dhamaan qalabyada wireless.
Marka aad dhammaystirto goobaha qaabeynta nidaamka WEP waxaad ku dhejisaa "Save Settings", waa inaad markaas aragto "Settings waa guul" wadahadal. Guji halkaan sii wad.
Raadi qaybta shaashadda ee MAC Wireless ee ku yaala kore ee shaashadda qalabka ka dibna riix in ay ku qaadato qaybta MAC Filtering. Raadi nidaamka Wireless MAC Filter oo aad awood u yeelatid. Ka dibna dooro "Ruqsadda Kaliya" ikhtiyaarka ah oo kaliya u ogolaanaysa qalabka ku xiran shabakada wireless marka ay jirkooda (MAC) ku qoran yihiin liiska filter. Ka dib ku dheji "Settings Settings", waa inaad markaas aragto "Settings waa guul" dood. Guji halkaan sii wad.
Hadda waxaad riixi kartaa badhanka Furaha MAC Filter List kaas oo furi doona daaqad cusub oo leh liiska MAC filter kaas oo aad kari karto. Tani waa meesha aad u baahan tahay inaad gasho cinwaanka MAC ee qalab kasta oo siman oo aad doonayso inaad u oggolaato helitaanka WLAN-gaaga.
FIIRO GAAR AH: Si aad u hesho MAC (cinwaanka jirka) ee mishiinka Windows furo bilawga bilowga iyo dooro orod. Nooca CMD ku qor wadada socodka oo riix OK. Daaqad istaraatiijiyadeed ayaa furan. Noocaan noocaan ah ee IPCONFIG / ALL. Soo hel cinwaanka "cinwaanka jirka" ee adreeska wireless. Waxaad u baahan doontaa cinwaankan si aad ugu darto liiska MAC filter.
Markaad gashay dhammaan cinwaanada MAC ee aad rabto inaad awood u yeelatid inaad geliso WLAN-gaaga MAC Fadlan Fadlan ku dhufo "Save Settings", waa inaad markaas aragto "Settings waa guul" dood. Guji halkaan sii wad.
Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, shaashadda aasaasiga ah> Liiska maamulka:
Raadi "khadka" Router oo aad bedesho lambarka sirta caadiga ah wixii aad u adeegsan lahayd markaad ujeeddo maamuleed goor dambe. Furahaas waxay ilaalineysaa nidaamka router ee ka iman kara kuwa soo galaya. Codso furaha sirta ee talaabada ugu horeysa si aad u abuurto ereygaaga sirta ah. Ku qor lambarka sirta dabadeedna ku adkee. Haatan waa la hubiyaa in HTTPS loo xulanayo habka adeegga sirta ah iyo shabakadda gelitaanka shabakadda, maamulaha fog iyo UPnP dhamaantood waa kuwo naafo ah. Markaad bedesho furaha sirta oo aad bedeshay goobaha maareynta waxaad ku dhejisaa "Save Settings", waa inaad markaas aragto "Settings waa guul" dood.
Hambalyo, waxaad si guul leh u xaqiijisay Your Raadinta LinksReaders WRT54G Wireless-G Broadband! Haddii ay kugu adkaatay wax dhibaatooyin ah oo ka shaqeynaya tababarkan, waa inaad tixraacdaa buuga alaabta.